သင် ဘယ်နက္ခတ်မှာ မွေးတာလဲ..? – စွယ်စုံသုတ
သင် ဘယ်နက္ခတ်မှာ မွေးတာလဲ..?
မိမိတို့၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို (၃)နဲ့စား (၁) ကြွင်းလျှင် နတ် နက္ခတ်၊ (၂) ကြွင်းလျှင် လူ နက္ခတ်၊ (၀) ကြွင်းလျှင် ဘီလူး နက္ခတ် ဖြစ် သည်။
ထို နက္ခတ် ပိုင်ရှင် တို့သည် လူဖြောင့်စိတ်တိုများဖြစ်ကြသည် မိမိသာမှန်ပါစေ ငြိမ်ခံလေ့မရှိဘဲ မှန်ရာကို အားမနာတမ်း ပြောဆိုဝံ့သည်။အပြိုင်အဆိုင်ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ရခြင်းကိုပျော်မွေ့သူဖြစ်သည်။
အပြောအဆို လိမ္မာသိမ်မွေ့သလောက် စိတ် ဓာတ်ရေးရာမှာ လွန်စွာ မာကြောသူများဖြစ်သည်။တဇွတ်ထိုးလည်း လုပ်ကိုင်တတ်သည်။သစ္စာ နှင့်မေတ္တာယှဉ်လာလျှင်တောင် သစ္စာ ကိုဦးစားပေးသူများဖြစ်ပြီး မှန်ကန်မှု ကို နှစ်သက်သူများဖြစ်သည်။
နတ်က္ခတ် တို့၏သဘောမှာ အနေအထိုင်တည်ကြည်ခန့်ငြားသည်။ သို့သော် မကောင်းသောအချက်မှာ တယူသန်စိတ်နှင့်တဇွတ်ထိုးပြုလုပ်တတ်သော စိတ်ဖြစ်သည်။ထိုစိတ် ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ မိမိအလိုရှိရာကို လှမ်းကိုင်နိုင်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမင်သူဖြစ်၍ ထိုသူတို့နှင့်ပတ်သက်လျှင်ကူညီပံ့ပိုးတတ်သည်။ထို့ကြောင့် အပေါင်းအသင်း ဆရာသမားများ၏ အကူအညီများမကြာခဏ ရတတ်သည်။ လောဘမကြီးသောသူများဖြစ်သော်လည်း လွန်စွာချမ်းသာစိတ်ပြင်းပြသူများဖြစ်သည်။မိမိရှိလျှင်လည်း မနှမြောဘဲ ပေးကမ်း တတ်သူများဖြစ်သည်။
သီချင်းသီဆိုမှု၊ ကခုန်မှုများကိုနှစ်သက်သည်။စတိုင် ကျကျနေထိုင်တတ်သည်။ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မရပ်မချင်း မိဘ ဆွေမျိုး များထံမှ လိုသမျှကို နားပူနာဆာပြုလုပ်တတ်သည်။အချစ်ရေး တွင်လည်း ပေါင်းအသင်းလောက်မမင်။
ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်အချိန်တော်တော်များများအတူမရှိတတ်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနှင့် အပြင်နေရာများတွင် အချိန်ကုန်သည်ကများတတ်သည်။သို့သော် အမှန်တကယ်ချစ်တတ်သူများလည်းဖြစ်ကြသည်။
မရည်ရွယ်သူများနှင့်လည်း ဖူးစာဆုံလေ့ရှိတတ်ကြသည်။အပေါင်းအသင်း မင်သူဖြစ်၍ အပေါင်းအသင်းကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ကောင်းသည့်ဘက် သို့ရောက်ရှိသွားတတ်ပြီး မကောင်းလျှင်မကောင်းသကဲ့သို့ မကောင်းမှုဘက်သို့ အားသာသွားတတ်သည်။စိတ်အရောင်ဆိုးလွယ်သည်။ မိမိရပ်တည်ချက်မှ တခြားသို့ နားယောင်လွယ်သည်။
စိတ်ဓာတ်မာသော်လည်း နားယောင်လွယ်ခြင်းသည် ယုံကြည်လွယ်သည့်အား နည်းချက်ကိုဖြစ်စေသည်။ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ
၂။ နားယောင်လွယ် ယုံကြည်လှယျသူုဖွဈသဖွင့ျ သူတစ်ပါးကို ယုံကြည်မလွယ်လေ တိုးတက်လေ ဖြစ်သဖြင့် ယုံကြည်မလွယ်ပါနှင့်။
၃။အပေါင်းအသင်း များလျှင်များသည့်အလျောက် အကုန်လုံးကိုပေါင်းသင်းခြင်းမပြုဘဲ ရှောင်သင့်သူရှောင် ပေါင်းသင့်သူပေါင်း မရှောင်နိုင်လျှင်လည်း ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာအတိုင်းနေထိုင်ရမည်။
၄။ စိတ် ရှည်သည်းခံပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းသည် နတ်နက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့အတွက် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိမည့်လမ်းပင်ဖြစ်သည်။
ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များသည် စကားအပြောအဆို မာသည်။ ပြတ်သားတတ်သည်။ ကွေ့ဝိုက်ပြောရသည်ထက် တည့်တည့်မခြွင်းမချန် ပြောလိုကြသည်။အပြောမာသော်လည်း စိတ်နှလုံးသိမ်မွေ့သည်။ ကိုယ်ကာယအားဖြင့်လည်း မည်သူ့အပေါ်မှ ရန်ပြုလိုစိတ်မရှိသူများဖြစ်သည်။
ဘဝတွင် သုခနှင့်ဒုက္ခယှဉ်လျှင် ဒုက္ခကိုပိုမိုရင်ဆိုင်ရသူများဖြစ်သဖြင့် ဘဝအသိအမြင် ဘဝအတွေ့အကြုံ များပြားသူများဖြစ်သည်။လက် တွေ့ဆန်သော ဘဝကိုဖြတ်သန်းရသူများဖြစ်သဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်မှုနည်းပါးသူများဖြစ်ကြသည်။
ဘဝပထမအရွယ်မှစ၍ အခက်အခဲမျိုး စုံကို ကြုံတတ်သူများဖြစ်ပြီး အရွယ်ရလာချိန်တွင်တော်ရုံတန်ရုံကိုခံနိုင်ရည်ရှိသူစိတ်ထားတတ်သူများဖြစ်နေသည်။ အရာရာကိုလေ့လာလိုက် စားလိုစိတ် စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိသည်။
ဘဝတွင်လည်း ပြောင်းလဲခြင်းများစွာရှိနေတတ်ပြီး မွေးရပ်မြေမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရခြင်းရုတ်တရက်အိမ်ထောင်ကျခြင်း၊မိဘများနှင့်ခွဲခွာရခြင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုးများနှင့်ခွဲခွာရခြင်းများကြုံတွေ့ရသူများဖြစ်သည်။မိမိအပေါ်ကို တင် စီးသောစကား မာနထောင်လွှားစွာ ပြောဆိုသော စကားများကို မခံချင်သူများဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ချက်ချင်းလိုပင် တုံ့ပြန်တတ်သည်။
အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးလိုသည့် စိတ်ရှိသည်။သူဆိုးလို့ကိုယ်လိုက်ဆိုးရင်ကိုယ့်ပါအပြစ်ရှိသူ ဖြစ်သွားတတ်သဖြင့် ထိုအချက်သည် အဓိက အားနည်းချက်ဖြစ်သည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကောင်းသောသူများလည်းဖြစ်ပြီး ဘဝပေးပညာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သောသူများလည်း ဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်မှာ အကျဉ်းအကြပ်ထဲတွင်ပင်အခွင့်အလမ်းကို ရအောင်ရှာဖွေတတ်ကြသည်။အကြောင်း အရာ တစ်ခုခုကို အမြဲတစေစဉ်းစားနေတတ်သည်။ မိမွေ ဖမွေထက် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်လိုသူများဖြစ်ပြီး ဘဝပေးအရလည်း ထိုကဲ့သို့ ပုံစံမျိုးသာဖြစ်လာတတ်သူများဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့်မတဲ့တတ်။မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေတတ်ပေ။ချစ်သူရည်စားများပြားတတ်ခြင်းသို့မဟုတ် အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ဘက် အပြိုင်အဆိုင် များကိုကြုံတွေ့တတ်ကြသည်။နောက်ဆုံးပြိုင်စရာမရှိလျှင် ချစ်သူအချင်းချင်း လင်မယားအ ချင်းချင်းအပြိုင်စိတ်ဆိုးခြင်း အပြိုင် စိတ်ကောက်တတ်ကြပေသည်။
ဘဝလုပ်ငန်းများတွင် ပညာရေးလုပ်ငန်းများထက် စီးပွားရေးများတွင် ပိုမိုအကျိုးပေးသူများလည်းဖြစ်သည်။ လိုက်နာရန်အချက်များကတော့
၂။နောက် အတိုက်အခံသဘောမျိုးတွေကိုရှောင်ပါ။ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချင်းထက် ဥပက္ခာပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် မထင်မှတ်သော ကျော်ကြားမှု ကောင်းသတင်းများအား ပိုင်ဆိုင်ပေလိမ့် မည်။
၃။စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပါ။ ရုတ်တရက်တုံ့ပြန်မပြောခင် စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးမှပြောဆိုပါက ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့် မည်။
၄။ကိုယ်ကာယအား စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ကောင်မွန်သူဖြစ်သဖြင့် စကားအပြောအဆိုကို ဆင်ခြင်စွာပြောဆိုခြင်းသည်ပင် လူနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့အတွက် ထိပ်ဆုံးရောက်ရှိမည့် လမ်းပင်ဖြစ်သည်။
ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်တို့သည် စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြသူများဖြစ်ပြီး တိုက်လျှင်နိုင်ရမည် ယှဉ်လျှင်သာရမည်ဆိုသည့် စိတ်ထားမျိုးရှိတတ်ကြသည်။အများစုမှာမခံချင်စိတ်များပြားသူများဖြစ်သည်။ အအရာရာကို လေ့လာလိုက်စားသောသူများဖြစ်ပြီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လုပ်တတ်သောသူများဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်ကိစ္စများတွင် တစ်ဝက်တစ်ပြက်များ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်သောသူများလည်းဖြစ်သည် ။ထိုသူတို့၏ စိတ်ဓာတ်သည် သူကောင်းလျှင် ကိုယ်ကောင်းမည်။ သူမကောင်းလျှင် ကိုယ်မကောင်းနိုင်ဟူသော ကြည့်မှန်သဖွယ် နေထိုင်ကြသည်။
ပေါင်းရသင်းရလွန်စွာခက်သောသူများဖြစ်ပြီး ကွယ်ရာတွင်ဝေဖန်အပြစ်ပြောခံရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပြီးထိုသို့ပြောသည်ကိုလည်း ဂရုစိုက်လေ့မရှိသူများလည်းဖြစ် သည်။
အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း ကိုယ့်အပေါ်တကယ်နားလည်သူကိုသာ ရွေးချယ်ပေါင်းလေ့ရှိသည်။လူအများနောက် လိုက်ထက်ဆရာလုပ်တတ်ခြင်း အမိန့်ပေးတတ်ခြင်း သြဇာပေးလိုစိတ်များရှိသည်။ထို့ကြောင့် ကိစ္စတော်တော်များများတွင် သိအောင်ကြိုးစားလေ့ရှိကြသည်။ဤနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များသည် သေလျှင်မြေကြီးရှင်လျှင်ရွှေထီးဟူသော စိတ်ထားမျိုးလည်းရှိပြန်သည်။
တခါတစ်ရံ ဝေခွဲမရသောကိစ္စများတွင် နောက်ဆုတ်လေ့မရှိ ရှေ့သို့သာ တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် ပြုမူတတ်ကြသည်။ထိုအချက်သည် မှားမှန်ချင့်ချိန်မှုအားနည်းတတ်သော အဓိကအားနဲချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအချက်ကိုတော့ အထူးပြုပြင်ရပေမည်သူတို့သည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုကြသည်။
ငယ်စဉ်အခါတွင် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားလွယ်ပေါက်ကွဲလွယ်တတ်သည်။သို့သော် နှစ်နှစ်ခါခါ ချစ်တတ်သူများဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုပေါင်းလုပ်ခြင်းထက်တစ်ဦးထဲလုပ်ကိုင်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အများအကျိုး နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင်အကျိုးလွန်စွာပေးသူများဖြစ်သည်။ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များမှာ
၂။မဝေခွဲနိုင်သောကိစ္စများတွင်တောင် တုံးတိုက်ကျားကိုက်စွန့်စားတတ်သူများဖြစ်သဖြင့် အမှားတွေဖြစ်တတ်ပြီး ဘဝအတက်အကျမြန်တတ်သည်။ထို့ကြောင့် ရှည်ကြာသောအောင်မြင်မှု မြဲမြံသော ရပ်တည်မှုများကို အလိုရှိပါက သေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း၊ ရှေ့တစ်လှမ်းအတွက် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်၍ အားယူခြင်းများ ကို ချိန်ဆလုပ်ဆောင်ပါ။
၃။မခံချင်စိတ်များပြားသဖြင့် မခံချင်စိတ်ကြောင့်တစ်ခါတစ်လေလောကကြီးကိုပင်အရွဲ့တိုက်တတ်ကြသည်။ထိုမခံချင်စိတ်အားစနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ခြင်း မှန်ကန်သောနေရာတွင် အသုံချတတ်ခြင်းသည်ပင် ထိုနက္ခတ်ပိုင်ရှင်များအတွက် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိမည့်လမ်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
မျက်နှာပေါ်က အမဲစက် အမာရွတ် မှဲ့ခြောက် နေလောင်ကွက်များ၂ပတ်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းမည့် ဆေးနည်း